I-Mo-Sys isungula uyilo olutsha olukhulu lwekhamera ye-gyro-uzinziso | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » iindaba » I-Mo-Sys isungula uyilo olutsha olukhulu lwekhamera ye-gyro-uzinzo
UMo-Sys, inkokeli yehlabathi ngokuchanekileyo kwizisombululo zokulandela umkhondo wekhamera kwizitudiyo ezibonakalayo kunye nenyani eqinisekisiweyo, namhlanje isungule isizukulwana esitsha se-gyro-uzinze kwintloko ekude, i-G30. Uyilo lwayo olutsha olunobunkunkqele, olune-compact, 45-degree frame, luyivumela ukuba ixhase phantse naluphi na usasazo okanye ubugcisa bedijithali yesinema yekhamera yokuhamba ngokuchanekileyo kunye nozinzo.
"Kwincoko yethu noluntu lwemveliso, siyazi ukuba kukho imfuneko yokwenene yozinzo kunye nokuchaneka kwekhamera ngaphandle kwenkcitho kunye nemida yokujongana nezixhobo ezithile kunye nokuthengisa," utshilo uMichael Geissler, u-CEO weMo-Sys. "Nokuba ikwinqwelo-mafutha, intaba ekude okanye indwe, abavelisi kunye nabalawuli bafuna ukungathintelwa ngokuyilayo, ngesixhobo esikhawulezayo ukuseta kunye nokulinganisa, kwaye baya kwamkela nayiphi na ikhamera kunye nezinto eziyimfuneko."
Isakhelo se-G30's 45 G geometry sibonelela ngokufikelela ngokulula kulo lonke uqhagamshelo lwekhamera kunye nezixhobo, ezenza kube lula ukufaka naluphi na uhlobo lwekhamera ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo. Isakhelo esifutshane, esiqinileyo sibonelela ngokuqina kweerigs ukuya kuthi ga kwi-30kg, kunye ne-torque ephezulu yokuqhuba ngokuthe ngqo kweemoto ukuhambisa ikrisimesi, intshukumo yekhamera echanekileyo ecaleni kozinzo oluhle. Iindawo ezivulekileyo zeemoto ezintathu zokuqhuba zithetha ukuba indlela yentambo icacile kwaye icocekile kwaye iyayiphepha imfuno yokutyibilika kunye neentambo ezithile zekhamera.
Uyilo lwesakhelo esahlukileyo lususa isithintelo esinzulu kuyilo oluthile lwentloko ye-gyro: umba wokutshixeka kwe-gimbal, apho intshukumo ye-pan axis- kubandakanya uzinzo- ayinakwenzeka xa ikhamera ikhomba ngqo ezantsi. I-G30 ine-pan enomtsalane kunye neentshukumo zentshukumo, kunye ne-± 45˚ roll, efanelekileyo kwimveliso emininzi yoyilo. Ii-axx encoders zakhelwe kwindibano nganye yemoto yokufaka ngokuthe ngqo kwiinkqubo zemveliso ebonakalayo.
Qalisa umthengi we-G30 yiMveliso eziQinisekisiweyo zoMdyarho, ezinze eMelbourne, e-Australia. Inika ingxelo ebanzi yokuhlangana okungaphezulu kwama-525 kwintlanganiso yomdyarho ngonyaka, kubandakanya nokulandela umkhondo weemoto zekhamera kuhlanga ngalunye. Imoto isebenzise i-gimbal yozinzo lwangaphambili lwe-Mo-Sys, kwaye i-TRP ngoku isebenzise i-G30 iinyanga ezininzi.
"Sithathe i-G30 ngaphandle kwebhokisi, sayibeka entabeni yethu sayilayita," utshilo uCharles Cole, umphathi wezobuchwephesha kwiTRP. "Ukuzinza komfanekiso wethu kubhetele kakhulu kunayo nantoni na esakhe sayibona ngaphambili - iziphumo bezintle kakhulu."
UCole wakhomba kuzinzo oluqinisekileyo lokudubula kwimoto ehamba ngokukhawuleza, kubandakanya nokuncitshiswa kokuphazamiseka okuhamba rhoqo ngenxa yemingxunya esecaleni kwendlela. Uye wancoma ubulula bokuseta, ngakumbi njengoko izifundo ezahlukeneyo zifuna useto lokwahlukahlukana kwaye ngenxa yoko amaxabiso ahlukeneyo okupenisha ukulandelela isenzo kakuhle.
Isoftware elawulayo ye-G30 ibandakanya ukubanakho ukucoca ulungelelwaniso lwekhamera ngokukhawuleza kwaye ubukhulu becala ngokuzenzekelayo, kunciphisa kakhulu ixesha lokuseta. Uyilo lwesakhelo esiqinileyo kunye nenkqubo yokulinganisa esekwe ngokuzenzekelayo iqinisekisa ukuba nayiphi na ikhamera efikelela kwi-30kg inokufakwa ngaphandle kwezinto zokulwa kwaye ikulungele ukusetyenziswa ngokukhawuleza. Abasebenzisi banokugcina iiseti zangaphambili zokudityaniswa kwekhamera esetyenziswa rhoqo ukukhawulezisa ukuseta nangaphezulu.
Ikhamera G30 Gimbal uzinzo gyro uzinzo gyro I-Mo-Sys UMo-Sys G30 Mveliso intloko ekude uzinzo uzinzo Imveliso eyiVenkile 2020-10-15
Previous: IMediaKind isungula i-CE1, ibhengeza umhlaba-wokuqala wokuqhutywa kwevidiyo
next: Isindululo esingenakwenzeka, abaDali be-AGITO, babhengeza ukuvulwa kweNtengiso yase-US